के अब ओलीले देउवालाई राष्ट्रपति बनाउँदै छन् ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
के अब ओलीले देउवालाई राष्ट्रपति बनाउँदै छन् ?
२०७७ आश्विन २२, बिहीबार ०८:०६:००
काठमाडौं- नेपाली कांग्रेस अहिले सत्तारुढ नेकपाको भातृ संगठनजस्तो भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विश्वासिला सहयोगी शेरबहादुर देउवा बनेका छन् । नेकपाका नेताहरुलाई लाभ पुर्‍याउन देउवाले कांग्रेसलाई दाउमा राखेका छन् ।
हालै मात्र प्रदेश-५ को राजधानी दाङ बनाउँदा त्यसको सम्पूर्ण जस नेकपा नेता एवं मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पाए ।
कांग्रेस आफैभित्र विभाजित भयो । संसदमा भएको वितण्डाले अपजस जति कांग्रेसको भागमा पर्‍यो ।
यो अवस्था आउनुमा कांग्रेस सभापति देउवाको भूमिका समेत कारण बनेको छ ।
किनभने, मुख्यमन्त्री पोखरेल र प्रधानमन्त्री ओलीको लहैलहैमा लागेर देउवाले आफ्ना नेता-कार्यकर्तामाथि कठोर नीति अपनाए । राजधानीको विरोधमा कोही सडकमा निस्किए कारवाही गर्ने चेतावनी देउवाले दिएपछि कांग्रेसको तल्लो तहमा असन्तुष्टि विष्फोटक बनेको छ । त्यसैका झिल्का संसदमा देखिए ।
युवराज खतिवडा, लोकदर्शन रेग्मी लगायतको अनैतिक र गैरव्यावसायिक लेनदेनका आधारमा भएको नियुक्तिप्रति देउवा मौन छन् । यती, ओम्नी र विशाल समूहलाई पोस्ने नीतिगत भ्रष्टाचारका प्रकरण छताछुल्ल हुँदा पनि कांग्रेस बोल्दैन । संसदीय समितिमा एनसेल प्रकरणमाथि प्रश्न गर्ने सांसदलाई देउवाले रातारात सरुवा गरी अर्कै समितिमा पुर्‍याए । यति मात्र होइन, नेविसंघ र तरुण दलले कुशासन र भ्रष्टाचारविरुद्ध सडक तताउन खोज्दा देउवाले धम्क्याए । आन्दोलन त्यसै तुहियो ।
वाइडबडीदेखि आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा एक शब्द उच्चारण नगर्न देउवाले आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका छन् । संवैधानिक निकाय र प्राज्ञिक संस्थाहरुमा एकाध नियुक्तिका लागि बालुवाटारमा खुसामद गर्न देउवा दिन बिराएर पुगिरहन्छन् । कांग्रेसले नियुक्त गरेका अरु सबै राजदूतलाई फिर्ता बोलाइसक्दा कामको नाममा एक सिन्को नभाँचेकी उनकी सासू प्रतिभा राणाको जागिर सुरक्षित रहन्छ ।
यी सबै प्रकरणले के देखाउँछ भने देउवाले कांग्रेसलाई नेकपामा विलय गराइसकेका छन् । कतिसम्म भने आफ्नै पार्टीभित्रबाट ओली अल्पमतमा परिसक्दा पनि संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले साथ दिन्छ । संसारको कुनै पनि सत्तापक्षसँग प्रतिपक्षको यो हदसम्मको घनिष्ठता देख्न मुस्किल पर्छ ।
ओली नेतृत्वको दलले पाँच वर्षका लागि जनादेश पाएको हो । अबको अढाई वर्षभित्र अर्को चुनाव भइसक्नेछ । त्यतिखेरसम्म ओली सरकारको लोकपि्रयता गएको चुनावमै जस्तो रहन्छ भन्ने छैन । अहिले नै पनि ओलीको अवरोह निकै तीब्र गतिमा भइसकेको छ । तर पनि देउवाले ओलीलाई ज्ञानेन्द्रकालीन दरबारभन्दा बढी शक्तिशाली ठानिरहेका छन् र रातोदिन पूजामा तल्लीन छन् ।
देउवाको ओलीभक्ति देख्दा लाग्छ, उनले तत्कालै कुनै गतिलै वर प्राप्त गर्दैछन् । तर, देउवाका लागि अब पाउनुपर्ने कुरा के छ ? देशको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दलको सभापति भइसके ।
गृहमन्त्री हुँदै चारपटक देशको प्रधानमन्त्री भइसके । अब पाउन बाँकी के छ ? के अब प्रधानमन्त्री ओलीले उनलाई राष्ट्रपति बनाउँदै छन् ? होइन भने सानदार प्रतिपक्षी भएर खबरदारी गर्नुपर्ने भूमिका बिर्सेर देउवाले ओलीसँग किन तथास्तु खोजिरहेका छन् ? कम्तीमा कांग्रेसजनलाई यो कुरा थाहा दिनुपर्छ ।
अझ उदेक र रहस्यमय विषय त के भने कांग्रेसको नेतृत्वमा बसेर कांग्रेसकै अस्तित्व समाप्त पार्न लाग्दा पनि रामचन्द्र पौडेल, सशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, कृष्ण सिटौला लगायत अग्रपंक्तिका नेताहरू एक शब्द नबोली बसेका छन् । उनीहरू पनि कुनै स्वार्थबाट प्रभावित भएर हो या आफ्नै अक्षमताले, यो हदसम्मको घात गर्दा पनि टुलुटुलु हेरेर बस्नु अर्को अक्षम्य गल्ती हो ।
यस्तोमा विमलेन्द्र निधि, शेखर कोइराला लगायत आसलाग्दा नेताहरू पनि मौन रहनु उचित होइन । त्यसैले विमलेन्द्र र शेखरसँगै गगन थापा, बद्री पाण्डे, प्रदीप पौडेल लगायत मिलेर नयाँ धार निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । र, उनीहरुले देशव्यापी कांग्रेस पुनःजागरण अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ । यो लोभी र लाचार पुस्तालाई विस्थापित गर्नुपर्छ ।